Macluumaadka Shirkadda | Warshadaha Winby & Ganacsiga Xaddidan
Ganacsade shumac xirfadle ah in ka badan 20 sano
Shumaca Winby waxay leedahay warshad gaar ah oo soo saarta nooc kasta oo shumacyo udgoon ah.Waxaan leenahay khibrado hodan ah, tikniyoolajiyad qaan-gaar ah oo ku jirta suuqa shumaca muddo ku dhow 20 sano. Sidoo kale waxaan haynaa koox xirfadlayaal ah oo bixiya adeegga ugu fiican iyo shumacyo macaamiisheena ka kala yimid adduunka oo idil.
Waxaan leenahay khibrado ganacsi oo wanaagsan oo ku saabsan alaabooyinka soo socda: Shumacyada muraayadda udgoon leh, Nalalka Shaaha, Shumacyada Tiirka, Shumacyada Codbixinta, shumaca haysta, shumacyada iyo qalabka kale ee shumaca.
Waxaan aaminsanahay in tayada wax soo saarka iyo adeega ay tahay nafta shirkad ka caawineysa macaamiisha inay keydiyaan miisaaniyada iyo waqtiga. Keenista tayo sare leh qiime tartan ah ayaa damaanad u ah xiriirkeena iskaashi ee waara. Ilaa hadda, waxaan kaqeyb qaadanay Carwada Canton sanado. Waa kuwan qaar ka mid ah sawirrada macaamiisheenna si aad u tixraacdo.
Waxaan leenahay warshad noo gaar ah oo soosaarta shumacyo udgoon.Waxaa jira boqolaal nooc oo kala duwan oo shumacyo udgoon ah.
Alaabta ceyriinka ah, waxaan u isticmaalnaa shamacyada loo yaqaan 'paraffin wax, soy wax, beeswax' iyo shamacyada kale ee dhirta shumacyadeena.
Udugga, waxaan u adeegsanaa in kabadan 100 nooc oo udgoon xul ah shumacyo udgoon. Alaab-keenayaasheena udgoonku waa udgoonkooda 'CPL aromas', symrise. Dhammaantood waa noocyada ugu sarreeya ee alaab-qeybiyeyaasha adduunka.
Waxaan u isticmaalnaa dheeh wax shamac ah Bekro, shirkad caan ah oo kiimiko Jarmal ah. Midabkooda shumaca shumaca waa mid aad u deggan, bey'addana ku habboon.
Waxaan leenahay naqshadeena iyo horumarinta waaxda, waxaanan ku siin karnaa adeegga OEM iyo ODM macaamiisha.
Alaabada qaar waxaa lagu dalban karaa tiro yar.
Udiyaro badan oo caan ah iyo midabbo qurxoon oo la heli karo.
Shumacyo udgoon ayaa loo isticmaali karaa musqulaha, xafiisyada, qolalka yoga, qolalka cilmu-nafsiga, iyo naadiyada, iwm. Shumacyada udugga ah ayaa si fudud u yareyn kara niyadda waxayna kuu qori karaan meel caraf jaceyl iyo qurux badan leh.
Fadlan ogow: Marka shumaca udgoon gubanaya, albaabada iyo daaqadaha waa la xiri karaa 10-30 daqiiqo, guud ahaan waxay ka dhigayaan qolka inuu ka buuxo udugga u dhigma, saameynteeda ayaa muuqata marka aad qolka ka soo gasho banaanka. Shumacyada udugga leh waa in laga fogaadaa meelaha socodka hawadu degdegga yahay, taas oo si weyn u yareyn doonta khibradda isticmaalka.